सबैभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ - Karobar National Economic Daily
सबैभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ
query_builderMay 3, 2017 10:39 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1874
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेल । तस्बिर :पूर्णिमा श्रेष्ठ
संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो स्थानीय तह कार्यान्वयनको प्रक्रियाका रूपमा मुलुक निर्वाचनको सँघारमा पुगेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो पटक स्थानीय सरकारका लागि हुन लागेको पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत मंगलबार प्रदेश ३, ४, ६ मा पर्ने ३४ जिल्लाका २ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले उत्साहका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने मतदाताहरू मतदानका लागि व्यग्र प्रतीक्षामा छन् ।
सिंहदरबारकेन्द्रित हक अधिकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै घरआँगनमा महसुस गर्ने गरी संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पनासहित संघीयता अलम्बन गरिसकेको छ ।
यसका लागि सबैभन्दा महत्व र परिवर्तनको आभास गराउने स्थानीय सरकारको संख्या र सीमा बनाउन संवैधानिक रूपमा सरकारले गठन गरेको गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग दिनप्रतिदिन कार्यान्वयनउन्मुख स्थानीय सरकारका सम्भावित चुनौती, कर्मचारी समायोजनको पाटो र स्थानीय तह बनाउँदा अवलम्बन गरिएका सापेक्ष आधारलगायतका बारेमा कारोबारकर्मी भगवान खनालले गरेको कुराकानी :
स्थानीय सरकारको निर्वाचनका लागि पहिलो चरणको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ ? आयोगको पूर्वअध्यक्ष हुनुको नाताले कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ?
व्यक्तिगत हिसाबले म एकदमै खुसी छु । वास्तवमा तीन वटा सरकारमध्ये स्थानीय तहको सरकार, जुन जनताको नजिकको सरकार हो, त्यसको निर्वाचन र गठन हुने प्रक्रिया सुरु भएकाले खुसी छु । यसलाई सुखद घटनाका रूपमा विश्लेषण गरेको छु ।
स्थानीय सरकार गठनपछिका चुनौती के देख्नुभएको छ ?
निर्वाचित सरकार गठन भएपछि कार्यालय गएको भोलिपल्टदेखि कसरी काम थाल्छन् भन्ने कुरा महŒवपूर्ण छ । उनीहरूले काम थाल्नका लागि यो बीचमा हामीले त्यसका लागि के–के पूर्वाधार बनायौं भन्ने पनि उत्तिकै महत छ ।
मेरो जानकारीमा भएसम्म नेपाल सरकारले कर्मचारी खटाउनेदेखि लिएर कतिपय प्रक्रियागत काम मिलाउने काम गरिरहेको छ । अफिस ड्राइभ गरेको भोलिपल्टदेखि उनीहरूको हातमा कानुन पनि हुँदैन, कर्मचारी पनि हुँदैन, अफिस पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन भएको हुँदैन । विधिहरू केही हुँदैनन् ।
यसैले यी सबै कार्य विधि पुर्याएर गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले विधि बसाउनेदेखिका सबै काम गर्नुपर्नेछ । यसैले पहिलो निर्वाचित सरकारको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण छ ।
पछिल्लो सरकारले त्यो बाटोलाई पछ्याउने सम्भावना बढी रहन्छ । हामीले विगतका अनुभव पनि हेर्याै भने यो देखिन्छ । सुरुका कार्यकालमा निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले बडो विचार गरेर संवैधानिक रूपमा बन्दोवस्त भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ ।
अर्को समस्या संगठनात्मक स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो निर्णय गर्नका लािग अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ । । कर्मचारी बन्दोबस्तीका समस्या छन् ।
अर्को भनेको राजस्वका हकमा पनि स्थानीय तहलाई दिएका स्रोत उठाउनु त छँदै छ । त्यसको परिचालन नीति पनि बनाउनुपर्नेछ । त्यसका अतिरिक्त संघ र प्रदेशबाट उसले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने रकम दाबी गर्नुपर्नेछ । उसले संघ र प्रदेशसँग आफ्नो अनुकूल बजेट माग गर्नुपर्छ ।
हुन एउटा मापदण्ड त बन्ला, तर मापदण्ड बनाउँदै गर्दाखेरि आफ्नो अनुकूल दाबी प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्छ । यसका लािग पनि उसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यसैगरी अर्को समस्या भनेको अहिले केन्द्रीय सरकारसँग सबै काम, साधन, स्रोत छ । कर्मचारी, सम्पत्ति, भवन सबै ह्यान्डओभर र टेकओभर गर्नुपर्नेछ । उनीहरूलाई बुझ्न लगाउने र बुझेर लिने काम पनि तदारूकताका साथ गर्नुपर्नेछ ।
उता, अर्को महत्वपूर्ण भनेको उसले संविधानले दिएको भूमिका डेलिभरी गर्नुपर्ने छ । एकाध वर्ष ह्यान्ड ओभर टेक ओभरको काममा समय बिताउनुपर्छ । यो निर्वाचित सरकारले दैनिक ६÷७ घण्टा काम गरेर हँुदैन । सुरुका वर्ष त १६÷१८ घण्टा काम गर्नुपर्छ ।
यसले नागरिकका अपेक्षा कसरी पूरा गर्ला ?
स्थानीय सरकारले ट्रान्जिसन व्यवस्थापन गर्दा केही पछि सर्भिस दिउँला भन्न सक्दैन । उसले त डे वानदेखि नै सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ । सरकारले त्यसका लागि साविकका काम अहिलेका वडातहमा प्रवाह गरेको छ । त्यहीँबाट नागरिकले सेवा पाउनेछन् ।
आयोगले पनि यही सिफारिस गरेको थियो । निर्वाचित सरकार भएपछि संविधानले दिएका काम पूरा गर्नुपर्ने छ । सिंहदरबारबाट भएका काम त्यहाँबाट डेलिभर हुनेछ । कानुन, योजना, नीति बनाउने काम गर्नुपर्नेछ । यसमा केही समय नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल सरकारसँग भएको लामो अनुभव, ज्ञान र कौशल स्थानीय सरकारलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्नेछ, तर यतिले मात्रै पुग्दैन । देशभर केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ज्ञान सीप हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेछ ।
एउटा तहलाई कति बजेट दिनुपर्छ ?
आयोगले त्यहाँको विकासदेखि सबै कुरा कति लाग्ला भन्ने अध्ययन गरेको थिएन । त्यो अवस्था पनि थिएन । तर, त्यहाँका पूर्वाधारको लेखाजोखा गरेको छ । जनसंख्या, क्षेत्रफल, शिक्षा, स्वास्थ्यचौकी, सडकलगायतका पूर्वाधारको अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
स्थानीय सरकारलाई बजेट दिने सम्बन्धमा केही सिद्धान्त अपनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यो छलफल र बहसमा आउनुपर्छ ।
धेरै ढिला भइसक्यो । उता, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अहिलेसम्म बनेको छैन । यो संवैधानिक आयोग बनाउन निकै ढिला भइसक्यो । मैले बारबार यो आयोग बनाउन ढिला भयो भन्दै आएको छु । आयोग बनेपछि त्यसले निश्चित सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय सरकारलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत बजेट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
संविधानले चार किसिमले स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई ससर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसको सबैभन्दा ठूलो गाइडिङ प्रिन्सिपल कामका आधारमा पैसा दिनु हो ।
आयोगले पनि प्रतिवेदनमा कामका आधारमा पैसा दिनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ । यसले पनि स्थानीय तहलाई पैसा दिन धेरै हदसम्म गाइड गर्छ । स्थानीय तहमा काम गएकाले त्यहीअनुसार बजेट दिनुपर्नेछ । जहाँ–जहाँ काम गयो बजेट जानुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भनिदिएका छौं ।
राजस्वको अधिकार केन्द्रमा बढी निहित भएकाले यहाँले भनेजसरी स्थानीय सरकारले बजेट पाउँछन् त ?
हो, राजस्व उठाउने अधिकांश स्रोत संघमा छ । किनभने नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले अप्रत्यक्ष कर, राजस्व उठाउने अधिकार केन्द्रमा राखिएको छ । किनकि उपभोक्ता एकातिर हुन्छन् भने कर संकलन गर्ने ठाउँ अर्कातिर छ । यो ठीकै छ ।
किनभने हाम्रो ट्याक्सको नेचरले पनि यस्तै गरेको छ । अब पैसा ट्रान्सफर भएन भने उनीहरू (स्थानीय सरकारलाई) काम दिएर मात्र हँुदैन । तपार्इंले भनेजस्तो शंका धेरैमा छ । तर, संविधान निर्माताहरूले काम गएपछि बजेट दिने भन्ने कुरा संविधानमै प्रस्टसँग भनिदिएकाले बजेट नदिने भन्ने कुरा आउँदैन
। संघले पनि काम र सिद्धान्तका आधारमा बजेट राख्ने हो । संघको भूमिका डेलिभरी (कार्यान्वयन) गर्नेभन्दा पनि रेगुलेटोरी (अनुगमन, मूल्यांकन) गर्ने भन्ने छ । संविधानले १२ कक्षासम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्यलगायतका कार्य स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ ।
अहिलेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मन्त्रालयले हेर्ने काम नै स्थानीय सरकारलाई दिएपछि त्यो बजेट उनीहरूलाई दिनुपर्छ । यसले के देखाउँछ भने प्रत्यक्ष रूपमा जनताको अघि बसेर गर्ने काम स्थानीय सरकारमा गएकाले बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारमा जानुपर्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले कसरी फेसिलियट गर्नुपर्छ ?
स्वाभाविक हिसाबले आफू बसिरहेको भूमिकाबाट तलमाथि हुँदा जसले पनि डिसप्लेसमेन्टलाई जोखिमका रूपमा लिन्छ । कर्मचारीतन्त्रले पनि वास्तवमा देशमा जुन परिवर्तन आएको छ त्यसमा समायोजित हुनुपर्छ । मैले उहाँहरू समायोजन हुने मुडमा हुनुभएको पाएको छु ।
एकात्मकबाट संघात्मक शासन व्यवस्थामा गएकाले यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ । निश्चय नै संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरी हरेक तहमा काम दिएकाले अब कर्मचारी पनि जानुपर्छ । हिजो देशभर एउटा मात्र सरकार थियो, अब उसको पनि भूमिका संकुचन भएको छ । उसको क्षेत्र देशभर भए पनि भूमिका अब रेगुलेटोरी भएको छ ।
यसैले अब प्रदेश र स्थानीय सरकारको कर्मचारी हुनुपर्ने भएको छ । अहिलेसम्म निजामती सेवा कुन सरकारमा रहने भन्ने टुंगिएको छैन । संविधानमा नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तोक्न सक्ने उल्लेख गरे पनि तोकिसकेको स्थिति छैन । यसैले अहिले निजामती सेवा फाजिलमा परेजस्तो स्थितिमा छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने थाहा भइसकेको छैन ।
कर्मचारीलाई तीनवटै सरकारको उहाँहरूको सेवा र काम मिल्ने गरी खटाउँदा बेस हुन्छ । यो काम पनि ज्यादै महत्वपूर्ण छ । कतै मिसम्याच भएमा समस्या हुन्छ । यसमा सरकारले हेर्नुपर्छ । उहाँहरूको कामको आधारमा, योग्यता र अनुभवका आधारमा खटाउनुपर्छ ।
उहाँहरू जहाँ–जहाँ खटिनु हुन्छ त्यहीँको जवाफदेहिता हुन्छ । नत्रभने संघीयताको अर्थ भएन नि ! हामीले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै गर्दा अनुभव, कार्यक्षमताको आधारमा काम गर्नुपर्छ । कर्मचारी समायोजन गर्ने ठूलो काम बाँकी छ । सरकारले ऐन बनाएर काम गर्नुपर्छ ।
आयोगले कर्मचारी समायोजन गर्दा उनीहरूले खाइपाइ आएको सेवा–सुविधामा नघट्ने गरी संघले गर्नुपर्छ भनेको छ । उनीहरूलाई निश्चित र वस्तुगत आधारमा प्रदेश र संघमा पनि मुभ गर्न सक्ने आधार मिलाएमा कर्मचारीमा पनि साँघुरो घेरा अनुभव फिल हँुदैन होला ।
उसको क्वालिटी, अनुभव, योग्यता परीक्षण गरेर लोकसेवाले लैजाने व्यवस्था गरेमा बेस हुन्छ । विदेशमा पनि निश्चित प्रतिशतमा मुभ गराएको देखिन्छ ।
आयोगले स्थानीय तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर सिफारिस गरेको छ ?
आयोगले ७१९ वटा स्थानीय तहमा ४७ हजार कर्मचारी चाहिन्छ भनेर सिफारिस गरेको छ । तर, संख्या बढेकाले यो पनि बढ्छ ।
स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुखले राष्ट्रियसभामा मतदान गर्न पाउने अधिकार कटौती गर्ने गरी संविधान संशोधनमा प्रस्तावित गरिनु, स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्ने कुटिल चालबाजी हुनुले पछिल्लो समय फेरि पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी हुँदै गएको देखिन्छ नि ?
सरप्राइज्ली स्थानीय तहलाई यति धेरै अधिकार दिएको भन्नेबारेमा संविधान निर्मातामा प्रस्टता थिएन भन्ने देखियो । उहाँहरूले जानेर–बुझेर नै संविधान बनाउनु नै भएको थियो होला । तर, अहिले जसरी स्थानीय तहको अधिकार केन्द्रतिर ल्याउने मनसाय देखिएको छ यसले फेरि केन्द्रीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको आभास हुन्छ ।
गाउँपालिका÷नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई राष्ट्रियसभामा मतदान गर्न पाउने अधिकार कटौती गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन । यसले हिजो कुन ढाँचामा संविधान बनाइएको थियो, अब यो भत्किने भयो । हिजो किन राखियो र आज किन हटाउन खोजियो ? उनीहरूले राष्ट्रियसभामा मतदान गर्न पाउँदा तीनवटै सरकारको बीचको सम्बन्ध परिभाषित गरेको थियो ।
अर्कातिर प्रदेशको पनि अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्ने पनि आएको छ । यसमा केन्द्रीकृत मानसिकताले गाइड गरेको भन्ने देखियो । प्रदेश कसरी रहने भन्ने प्रदेशभित्रका जनताले निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई कटौती गर्न खोजिएको छ । यो पनि कताकता केन्द्रीकृत मानसिकता देखिएको छ ।
मानिसहरूमा नजानिँदो हिसाबले केन्द्रीकृत मानसिकता आएको देखिन्छ ।
नागरिकमा पनि यो माइन्ड सेट देखिन्छ । राजनीतिज्ञ, पेसाकर्मीमा पनि देखिन्छ । किनकि संघीय व्यवस्थामा हामी अभ्यस्त छैनौं । हाम्रो माइन्ड सेडबाट हामी प्रताडित छौं । यसमा परिवर्तन ल्याउन मिडियाको भूमिका हुनुपर्छ । यसमा ऊ पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । आगामी दिन प्रेसको भूमिका अझै महत्वपूर्ण देख्छु ।
आयोगले कस्तो सापेक्षताका आधारमा स्थानीय एकाइहरू बनाएको थियो ?
हामीले संख्या निरपेक्ष रूपमा धेरै र थोरै भन्नु हँुदैन । के आधारमा धेरै–थोरै भन्ने हेर्नुपर्छ । यसैले मुलुकका आफ्ना सापेक्षमा प्रदेश छन् । कति ठूलो साइजको हुने ? कतिलाई सानो–ठूलो भन्ने ? यसलाई सम्बन्धित मुलुकको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
यसलाई दिएको भूमिकाको सापेक्षतामा पनि हेर्नुपर्छ । काममा समष्टीकरण भयो, तर युनिट खण्डीकरण भयो भने फक्सनल हुन्न । जे जिम्मा दिएको छ पूरा गर्न सक्दैन । साउथ अफ्रिकामा पहिले एकाइको संख्या धेरै थियो, तर पछि घटाइयो । संसारभर एकाइ घटाउने टे«न्ड देखिन्छ ।
हामीले चाहिँ जनसंख्या, काम, प्राकृतिक स्रोत–साधन, सामाजिक बनौट, भूगोललगायतको सापेक्षतामा हेरेर एकाइ बनाएका हौं । यस्तै आयोगलाई सरकारले दिएको बाध्यता पनि थियो । आयोगले ७ सय १९ एकाइ पनि बाध्यताको हिसाबले पुगेको हो ।
यो पनि वास्तवमा धेरै हो । त्यसैले आयोगले आगामी एउटा चुनाव भएपछि रिभ्यु गरेर संख्या घटाउनुपर्छ भनेका थियौं । तर, सरकारले ७ सय ४४ पु¥यायो । सरकारले राजनीतिक निर्णयले मात्रैै बढाएको हो ।
उसले प्राविधिक र कानुनी रूपमा जस्टिफाई गरेको होइन । यसैले एकाइ बनाउँदा विशुद्ध रूपले राजनीतिक निर्णयले मात्र पुग्दैन । आधार चाहिन्छ । यो कुरा भोलि जनताले भन्लान् ।
वर्तमान सरकार अझै पनि एकाइ थप्न उद्दत देखिएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
अब पनि संख्या थप्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । यसो गर्दा ती एकाइले संविधानले दिएको भूमिका प्रयोग गर्न सकेनन् भन्दै केन्द्रतिर तान्ने त होइन भन्ने संशय पैदा गरेको छ । यसमा आमनेपालीले चासो दिएका छन् । म त नेपाली जनतालाई स्यालुट गर्छु ।
किनकि आयोगले दोस्रो पटक सरकारबाट पाएको कार्यसर्त र कार्यविधिका आधारमा ७ सय ४४ एकाइको सीमा दिँदा पनि तलबाट ७ सय १९ को मात्रै सिफारिश भएर आएको थियो । तल्लो तहबाट जनताको सहभागितामा आएको यो निर्णयलाई सलाम गर्छु । लोकल विज्डमलाई अन्डरमाइन्ड होइन रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ ।
हाम्रो संघीयता कस्तो हो ?
संविधानतः हाम्रो कोअपरेटिभ फेडारिलिज्म हो । हामीमा तीन तहको संघीयता हो । तीन तहका सरकार संविधानतः एकको अर्को अधीनस्थ होइन । तर, कम्प्लिट्ली फरक हुन भन्ने पनि होइन ।
समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको आधार हो । पछि यी भनेका के हो भन्ने परिभाषित हुँदै जाला । यहाँ सेल्फ र सेयर्ड रुल छ ।
अनुसूची ८ सेल्फ रुल हो भने ७ र ९ सेयर्ड रुल हो । त्यसैले सबै खालको विशेषता छ । हाम्रा केही सीमितता पनि छन् । साझा अधिकार सूचीमा संघ र प्रदेश हाबी हुन्छ ।
मतदातालाई केही सmुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
यो चुनावमा मतदाताले कस्तो उम्मेदारलाई छान्ने हुन् भन्ने पनि कौतूहल हुन्छ । अब हिजोका गाविस र नगरपालिका होइनन्, आपैmंले कानुन बनाउँछन् । हिजो सिंहदरबार मात्रै शासन गर्ने एकाइ थियो भने आज गाउँपालिका र नगरपालिका पनि शासन गर्ने एकाइ भएका छन् ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मन्त्रीको जत्तिको हैसियतमा हुने मैले देखेको छु । यसैले सक्षम कामप्रति इमानदार र नैतिकवान् शासक छान्नुपर्छ । आफू कस्तो शासकबाट शासित हुने भन्ने मतदाताले छान्नुपर्छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग निर्वाचन संविधान कार्यान्वयन